Mozika mavesatra: hanolotra « Revy rock » i Roova | NewsMada
Raikitra ! ny alin’ny zoma 31 novambra ho avy izao, eny amin’ny SK Melody Mandriambero Ambohidratrimo, hanolotra, alim-pikoranana (cabaret), hisalotra ny anarana “Revy rock” i Roova. Mpanakanto mandia ny faha-10 taona nivoizana ny mozika rock. Anisan’ny ahafantarana azy ilay hira “Ho anao irery ihany. Ankoatra an’i Roova, hovahinin’ny tovolahy eny an-toerana ihany koa ny tarika Green sy i Rheg ary Jeneraly.
Hampiavaka ny fiarahana eny an-toerana ny hanoloran’ny tarika ireo vokatra kantony roa vaovao be. Ao koa ny kapila mangirana voalohany “Ho anao irery ihany”. Hirakitra sanganasa miisa 16. “Hira madinika hiresaka seha-piainana maro toy ny fitiavana, ny trangam-piainana andavan’andro, ny hatanorana, sns… sahaza ny rehetra no handrafitra ity kapila mangirana voalohany ity”, hoy i Roova.
Anatin’ny kapila mangirana faharoa kosa no handraiketana ireo sanganasa voasokajy anatin’ny hira evanjelika. “Hafatra”, anarana hisaloran’ity vokatra faharoa ity, sanganasa mahatratra 16 ihany koa ao anatiny. Anisan’ny handrafitra ny fandaharan-kira, ny zoma izao, eny amin’ny SK Melody, ireo sanganasa voarakitra anatin’ireo kapila mangirana roa ireo. Hanatevina izany ihany koa ny hivazoan’i Roova ireo hiran’ny mpanakanto vahiny.
“Lamina vaovao sy fomba fiasa hoentina miady amin’ny piraty ny hizarana maimaimpoana amin’ireo mpankafy ny vokatra”, hoy i Roova. Hisy ihany koa fomba fiasa hapetraka iarahana amin’ireo foiben-tserasera eto an-dRenivohitra sy manerana ny Nosy ho amin’ny fampahafantarana azy ireo ho an ’ny mpankafy.
Tsiahivina fa efa manana ireo foto-drafitrasa ho amin’ny fikirakirana ny mozika i Roova. Tsongaina amin’ireny ny efitrano fandraisam-peo sy ny fanaovana famerenana ary ireo fitaovana hiaka faran’ny teknolojia ho amin’ny famokarana rakipeo.